Bohriyaam - Gpedia, Your Encyclopedia
Ninka loogu magaca daray curiyaha Bohriyaam, Niels Bohr.
Bohriyaam (ingiriis: Bohrium) astaanta (Bh) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay boqol-iyo-todoba (107). Curiyaha Bohriyaam waa bir ka tirsan Transitional Metalska guruubka 7aad ee Diwaanka Curiye, taas oo miisaanka atomkeedu yahay 270.
Curiyaha Bohriyaam waxaa loogu magac daray saynisyahanka reer Denmark ee Niels Bohr, waana curiye lagu sameeyo laabka (laboratory) oon laga helin dhulka ayadoo dabiici ah. Bohriyaamtu waa radioactive hab-dhismeedkeedu daganayn, halka isotope ee dagan waa 270Bh taas oo noolaan karta cimri dhan 61 ilbiriqsi.
Curiyaha Bohriyaam waxay ka mid tahay bir guruubka 7aad ee diwaanka curiyahaha iyo biraha guruubka d-block.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bohriyaam&oldid=142418"